ရေဆင်းချိုးလျှင် ရောဂါဝေဒနာများ ပျောက်ကင်းသည် ဟုဆိုကာ ရေးမြို့နယ်ရှိ ကျောင်းရွာချောင်းကိ? - Yangon Media Group
ရေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်ရှိ ကျောင်းရွာကျေးရွာအနီး ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသည့် ကျောင်းရွာချောင်းရေသည် ရောဂါ ဝေဒနာများကို ပျောက်ကင်းစေသည်ဟု ယူဆကြသောကြောင့် ဘုရားဖူးများနှင့် ရေကစားသူအစရှိသည့် ခရီးသွားများရာချီ၊ ထောင်ချီလာ ရောက်လည်ပတ်မှုများရှိနေကြောင်း ဒေသခံများ၏ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါ ချောင်းသည်ကျောင်းရွာကျေးရွာအုပ်စုရှိ ရေးမြစ်နှင့် မင်းလှချောင်းဆုံရာ ဒေသဖြစ်ပြီးကျောင်း ရွာကျေးရွာကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသည့် ချောင်းတစ်ခုဖြစ်ကာ ဆေး တောင်ကိုဖြတ်ပြီး စီးဆင်းခဲ့သော ရေဖြစ်၍ ဆေးဖက်ဝင်ပြီး ရောဂါ ဝေဒနာပျောက်ကင်းသည်ဟု ယုံကြည်လာကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ”မနှစ်က နှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီး တော့ လူသိများလာတယ်။ အခါကြီး ရက်ကြီးတွေဆို ကားရပ်စရာမရှိ တော့ဘူး။ မင်းလှချောင်းက ဆေး တောင်ကနေ စီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေ ဖြစ်တော့ ဒီကရေကိုချိုးရရင် ရောဂါ ဝေဒနာ ပျောက်ကင်းတယ်။ လှပစေတယ်လို့ ယုံကြည်ပြီးလာကြတဲ့သူ တွေလည်းရှိတယ်။ သမိုင်းကြောင်း လည်း အဲဒီလိုပဲရှေးလူကြီး တွေက ပြောထားခဲ့ဖူးတယ်”ဟု ကျောင်းရွာ ကျေးရွာစီမံရေးရာ ကော်မတီဝင် ဦးကျော်ဝင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေး ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ပြောသည်။
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင်ချောင်းနှစ်ခွဆုံရာအရပ်တွင် ချောင်းနှစ်ခွရေ လယ်စေတီတော်တည်ထားခဲ့ရာမှ ဘုရားဖူးများဖြင့် ပိုမိုစည်ကားလာ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံခြားသားများလည်း လာရောက်လည်ပတ်နိုင် အောင် ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရသည်။ ”ပြေးဆွဲနေတဲ့လှေ ၄၁ စင်းရှိတယ်။ လှေစီးသူတွေအတွက် အလှူ ရှင် ကိုထွန်းနိုင်နဲ့ဇနီးက သက်ကယ်အင်္ကျီ ၂ဝ လှူထားတယ်။ လှေခက ကျပ် ၁ဝဝဝ အသွား၊ အပြန်ပါ။ စင်းလုံးငှားရင် ကျပ်၁ဝဝဝဝ ကျပါတယ်။ ဘုရားဖူးဖို့နာရီဝက်စောင့် ပေးတယ်။ အမှိုက်တွေကတော့ အတန်းအစားအလိုက်ခွဲခြားစွန့်ပစ်စေတယ်။ ချောင်း ထဲကို ပေးမပစ်ဘူး။ သန့်ရှင်းရေး အတွက် လူငှားနှစ်ဦးထားထားတယ်။ အိမ်သာလည်းဆောက်ထားပေး တယ်။ ရွာကနေချောင်းထဲကို ဆင်းတဲ့လမ်းလည်းကောင်းအောင်လုပ် ဖို့လျာထားပါတယ်”ဟု ဦးကျော်ဝင်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ရေးမြို့နယ်မှ လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးမြသန်းကလည်း ”အလားအလာကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ စနစ်တကျစည်းကမ်းတ ကျဆောင်ရွက်သွားဖို့၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်နှစ် ထက်တစ်နှစ်တိုးတက်လာတဲ့ နေ ရာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယင်းကျောင်းရွာချောင်းသို့ ပုံမှန် နေ့စဉ်လူဦးရေ ၂ဝဝ အထက် လာရောက်ကြကြောင်းနှင့် အခါကြီး၊ ရက်ကြီးများတွင် တစ်ရက်လျှင် လူဦးရေ ၅ဝဝဝ လာရောက်ကြောင်းနှင့် ရေးမြို့နယ်တွင် ခရီးသွားများ အထူးစိတ်ဝင်စားသည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလေးမျက်နှာထိုင်တော်မူ ရုပ် ပွားတော်၊ ရှေးဟောင်းကျုံးတော် ကြီး၊ ကဗျာဝကမ်းခြေ၊ အနောက် ပင်လယ်ဝတို့အပြင် ကျောင်းရွာ ချောင်းနှစ်ခွနေရာကိုလည်း ခရီးသွားများအထူးစိတ်ဝင်စားပြီးလာ ရောက်လည်ပတ်ကြသည်။
ထိုင်းနိုင် ငံ မဲခေါင်မြစ်အနီး နှစ်သစ်ကူးတွင်ရောင်းချမည့် ဆေးခြောက်ကီလိုဂရမ် ၆၁ဝ ဖမ်းမိ
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဆေးရုံ စာစစ်ဌာနများမှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုရသည့် အရေအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံ
အမေရိကန်နိုင်ငံ မပါဘဲ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက် အသစ်တစ်ခု TPP နိုင်ငံများ ရရှိ
‘ရန်ကုန်မြို့ပြ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်’ကို ရန်ကုန်မြို့တွင်း လမ်းအချို့တွင် သုံးရက်တိုင်တိုင် ကျင??